बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (बुधवार, २९ असार २०७३)
कम्पनीको २०७२/७३ आवको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १९ दशमलव ४३ प्रतिशत बढेको छ । बुटवल पावर कम्पनीको असार २७ गते सम्पन्न भएको विशेष साधारणसभामा प्रिमियममा ३० हजार कित्ता थप नयाँ शेयर निष्कासन (एफपीओ) गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
आरएसआई : ओभरबट जोन (७६ दशमलव २९ स्केल)मा छ । खरीद चाप बढेको छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १३ दशमलव ६९ बिन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेज : सातदिने एभरेज रेखा र २१ दिन एभरेज रेखा नजिकिँदै गएका छन् । यस्तो बेला सातदिने रेखाले २१ दिने रेखालाई माथिबाट काटेर तल गएमा शेयरमूल्य घट्छ । २१ दिने रेखामा टेवा पाएर फर्किएमा बजार बढ्छ । हालको मूल्य सातदिने रेखा र ट्रेण्ड लाइनभन्दा तल रहेको छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. ८ सय २४ मा टेवा पाउन सक्छ ।
- कम्पनीको २०७२/७३ आवको तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १९ दशमलव ४३ प्रतिशत बढेर रू. ५८ करोड ५५ लाख पुगेको छ । विद्युत् विक्रीबाट भएको आम्दानी करीब २४ प्रतिशत र कुल आम्दानी १२ दशमलव ७० प्रतिशत बढ्नाले खुद नाफा बढेको हो ।
- जगेडा कोष ९ दशमलव ३४ प्रतिशत बढेर रू. १ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ ।
- खुद चालू सम्पत्ति ८ दशमलब २९ प्रतिशत बढेर रू. ७२ करोड ४८ लाखमा सीमित भएको छ भने खुद चालू दायित्वमा केही सुधार भएको छ ।
- ऋण २० दशमलव ८१ प्रतिशत घटेर रू. ७३ करोड ४५ लाखमा सीमित भएको छ ।
- प्रशासनिक खर्च ५ दशमलव ६७ प्रतिशत घटेर रू. ७ करोड ८५ लाखमा सीमित भएको छ ।
- कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख भएअनुसार पीई रेशियो साढे १७ गुणा र प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३५ छ । हालको शेयरमूल्य नेटवर्थको ४ गुणा छ ।